China Fibreglass rays Fibreglass vulu mveliso kunye nabathengisi | Yuniu
Umsonto we-fiberglass zizinto zokufakelwa kombane, amalaphu e-elektroniki, iityhubhu kunye nezinye izinto zelaphu zokwenza izinto. Isetyenziswa ngokubanzi kwibhodi yesekethe, ukuluka zonke iintlobo zamalaphu kubungakanani bokuqinisa, ukumisa, ukumelana nomhlwa, ukumelana nobushushu njalo njalo.
Umtya we-fiberglass ngumsonto ojija i-fiberglass. Amandla ayo aphezulu, nokumelana, phezulu
ukumelana nobushushu, ukufakwa kokufuma, ukusebenza kakuhle kokufakelwa kombane, okusetyenziselwa ukuluka, ukufaka isinyithi, ucingo lwefuse, kunye nokwaleka kwentambo, ukubhijela oomatshini bombane kunye nezixhobo zokwambathisa izixhobo, umatshini wokuluka oomatshini ohlukeneyo, kunye nomnye umsonto womzi mveliso.
9um IECG 150 1/3 S65
5.5um IECD450 1/0 S40
5.5um IECD450 1/2 S40
1.Woven fiberglass mesh (vulu jikelele for warp, befuna weft)
2.Weaving ngelaphu ezahlukeneyo elektroniki
3. osontiweyo wire cable khazi
5. fuse olukiweyo
6.Izinto zokuvala izixhobo zokwenza umbane, njl.
Isetyenzisiwe iphepha lephepha okanye iplastiki yokuthambisa, iimveliso ezigqityiweyo zibekwe kwingxowa yePolyethylene, qhoboshela ibhegi, emva koko ubeke umsonto we-fiberglass kwibhokisi, ekugqibeleni ubeke i-pallet.
Zokuthunyelwa: Elwandle okanye ngomoya.
Iinkcukacha zokuhanjiswa: kwiintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 emva kokufumana intlawulo ephambili.
1.Izinto zeglasi yefayibha yentsimbi yiSisel sizing, ngentembeko elungileyo, ukungavisisani okufanayo, kunye namandla aphezulu eqine.
Intsimbi yethu yeglasi yefayibha ine-Fuzz encinci ngexesha lokulungiswa.
3.Our iglasi ifayibha vulu na ukumitha elungileyo, ifayibha kwiintsali elungileyo, kunye neempawu eliphezulu ngoomatshini.
4.Iintambo zivulekile ngokulula ukubonisa ii-filaments zazo ngamandla amancinci asebenzayo
Isantya esisezantsi sokugcotywa komile ngaphezulu kweendawo zonxibelelwano ze-creel.
6. Singakwazi ukuvelisa ngokwemfuneko yomthengi.
Q1Uyintoni umahluko weemveliso zakho phakathi koontanga?
Ukuhanjiswa okuqinisekisiweyo, umgangatho ngokuhambelana nemigangatho yamazwe aphesheya, ngokuhambelana nemigangatho ephezulu yokuvavanywa kwe-EU
UmbuzoZenziwe njani iimveliso zakho? Zithini izinto ezizodwa?
Ngokukodwa kubandakanya i-silica, i-pyrophyllite, isanti ye-quartz, i-limestone, i-dolomite, i-bornite kunye ne-brucite
UmbuzoNgaba uhlawulisa isikhunta? Yimalini? Ngaba ingabuyiselwa? Uyibuyisela njani?
UmbuzoSesiphi isiqinisekiso esidlulileyo kwinkampani yakho?
Umbuzo 5Ngabaphi abathengi abathe inkampani yakho yaphumelela kuvavanyo lomzi mveliso?
Egqithileyo Fibreglass ngqo ezihamba
Okulandelayo: 1200Tex 2400Tex Fibreglass ngqo Ukuhamba ukusuka China